ဘီနင်နိုင်ငံမှ နိုးလော့! စာရေးသူ ပေးပို့သည်
“ပုံစံစာရွက်ထဲမှာ လူမျိုးဆိုတဲ့အကွက်ကို ကျွန်တော်ဖြည့်တိုင်း ‘လူဖြု’ ဆိုတဲ့အကွက်ကို အမှတ်အသားပြုတဲ့သူတွေထက် ကျွန်တော်က ပိုဖြူပေမဲ့ ‘လူမည်း’ ဆိုတဲ့အကွက်ကိုပဲ အမှတ်အသားလုပ်တယ်” ဟုဂျွန်ကဆိုသည်။ ဘီနင်နိုင်ငံနှင့် နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံနယ်စပ်အနီးတွင် နေထိုင်သော အနောက်အာဖရိကသားတစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျွန်သည် မျက်လုံး၊ အရေပြား သို့မဟုတ် ဆံပင် (တချို့ဖြစ်ရပ်တွင် မျက်လုံး၌သာ) တို့တွင် အရောင်အနည်းငယ် သို့မဟုတ် အရောင်လုံးဝမရှိသည့် မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါဖြစ်သော ဖြူရောင်စွဲရောဂါ ခံစားနေရသည်။ ဖြူရောင်စွဲရောဂါ မည်မျှပျံ့နှံ့နေသနည်း။ ယင်းသည် လူတစ်ဦး၏ နေ့စဉ်အသက်တာကို မည်သို့ထိခိုက်စေသနည်း။ ၎င်းတို့၏အခြေအနေကို ခါးစည်းခံနိုင်ရန် ဖြူရောင်စွဲရောဂါသည်များအား အဘယ်အရာက ကူညီပေးနိုင်သနည်း။ *
ဖြူရောင်စွဲရောဂါသည် အသားမည်းသော လူမျိုးတွင် အဖြစ်များသော်လည်း လူမျိုးတိုင်းတွင် တွေ့ရှိရသည်။ လူ ၂၀,၀၀၀ တွင် ၁ ဦးသည် ဖြူရောင်စွဲရောဂါ ခံစားနေရသည်ဟု ခန့်မှန်းရ၏။
ဖြူရောင်စွဲရောဂါပါရှိနေသော မျိုးရိုးဗီဇသည် မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာမျှမပြဘဲ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် မျိုးရိုးလိုက်နိုင်ပါသည်။ ဂျွန်၏ဖြစ်ရပ်တွင်လည်း ထိုသို့ပင် ဖြစ်သည်။ သူ၏ဆွေမျိုးတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ဖြူရောင်စွဲရောဂါရှိသည့် ဘိုးဘေးတစ်ဦးဦးကို မမှတ်မိကြတော့ချေ။
“ဖြူရောင်စွဲရောဂါ” ဟူသောစကားလုံးသည် ၁၇ ရာစုမှ ပေါ်တူဂီလူမျိုး စူးစမ်းရှာဖွေသူများနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည်ဟု လူအများက ယူမှတ်ကြ၏။ အဆိုပါစူးစမ်းရှာဖွေသူများသည် အနောက်အာဖရိကကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ရွက်လွှင့်လာသောအခါ အသားမည်းသူများနှင့် အသားဖြူသူများကို တွေ့ မြင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသူတို့သည် လူမျိုးနှစ်မျိုးဖြစ်ရမည်ဟု ယူဆကာ မိမိတို့၏ပေါ်တူဂီဘာသာစကားဖြင့် “အသားမည်း” သူများကို နီဂရိုးဟူ၍လည်းကောင်း၊ “အသားဖြူ” သူများကို အယ်လ်ဘီနိုစ်ဟူ၍လည်းကောင်း အသီးသီးခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
အသားဖြူသူအများစုသည် နေရောင်ထဲ တစ်ခဏ ထွက်လိုက်သည့်အခါ သူတို့၏အရေပြားရှိ မယ်လနင်ဟုခေါ်သော အမည်းရောင်ခြယ်ဓာတ်က အရေပြားကိုကာကွယ်ပေးသဖြင့် အရေပြားမှာ ညိုလာသည်။ သို့သော် ဂျွန်သည် အဖြစ်အများဆုံးရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည့် မျက်လုံးနှင့်အရေပြားဖြူရောင်စွဲရောဂါကို ခံစားနေရသည်။ * သူ၏အရေပြား၊ ဆံပင်နှင့် မျက်လုံးများတွင် မယ်လနင်ဓာတ်ချို့တဲ့နေသည်။ ယင်းကြောင့် သူ၏အရေပြားတွင် မည်သို့ဖြစ်နေသနည်း။ အရောင်ကင်းမဲ့နေသော ဖြူရောင်စွဲရောဂါရှိသူတစ်ဦး၏ အရေပြားသည် အလွယ်တကူ နေလောင်ခံရ၏။ နေလောင်ခြင်းသည် မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ပြီး နာကျင်သောအခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မိမိတို့၏အသားအရေကို ကောင်းစွာမကာကွယ်ထားသည့် ဖြူရောင်စွဲရောဂါရှိသူများသည်လည်း အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယင်းသည် အထူးသဖြင့် အပူပိုင်းဒေသများတွင် အဖြစ်များ၏။
သို့ဖြစ်၍ ဖြူရောင်စွဲရောဂါရှိသူတစ်ဦးအတွက် မိမိအသားအရေကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်သည့် နည်းတစ်နည်းမှာ နေရောင်ကိုကာကွယ်သည့်အဝတ်အစားများ ဝတ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ ဂျွန်သည် လယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သူ လယ်ထဲဆင်းသောအခါ အနားကျယ်သည့် ကောက်ရိုးခမောက်ဆောင်းကာ လက်ရှည်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ထားရသည်။ ထိုသို့အကာအကွယ်ပြုလုပ်ထားသော်လည်း သူက ဤသို့ရှင်းပြ၏– “တစ်ခါတလေ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး အတွင်းထဲမှာ လောင်မြိုက်နေသလို ခံစားရတယ်။ အိမ်ရောက်လို့ လက်မောင်းကို ကုတ်လိုက်တဲ့အခါ လက်သည်းကြားမှာ အရေပြားတွေကပ်ပါလာတတ်တယ်။”
နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ နေရောင်ကာလိမ်းဆေးရနိုင်ပါက ယင်းကို လိမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်ကာကွယ်သည့်ဝတ္ထု အနည်းဆုံး ၁၅ ဆပါဝင်သည့် လိမ်းဆေးက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ယင်းကို နေပူထဲမထွက်မီ မိနစ် ၃၀ ကြို၍ အလုံအလောက်လိမ်းထားသင့်ကာ ယင်းနောက် နှစ်နာရီခြားတစ်ခါ လိမ်းပေးပါ။
ဖြူရောင်စွဲရောဂါသည် မျက်လုံးကိုလည်း နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ အများအားဖြင့် မျက်စိသူငယ်အိမ်ထဲသို့ နေရောင်ခြည်မဝင်ရောက်စေရန် မျက်ဝန်း၏အရောင်က ကာထားပေးသည်။ သို့သော် ဖြူရောင်စွဲရောဂါရှိသူတစ်ဦး၏မျက်ဝန်းသည် အလင်းဖောက်လုနီးပါးဖြစ်နေရာ ယင်းကြောင့် မျက်ဝန်းကိုဖြတ်၍ မတော်တဆဝင်လာသော အလင်းရောင်သည် မျက်စိကို ကျိန်းစပ်စေပါသည်။ မျက်စိကျိန်းစပ်ခြင်းမရှိစေရန် လူတို့သည် လျှာထိုးဦးထုပ်၊ နေရောင်ကာ သို့မဟုတ် နေကာမျက်မှန်များ ဝတ်ဆင်ထားကြသည်။ အခြားသူတို့မူ အရောင်ပါသည့် မျက်ကပ်မှန်များ တပ်ဆင်ထားကြသည်။ ဂျွန်အတွက်မူ ရက်ပေါင်းအတော်ကြာ မျက်စိကိုကာကွယ်ပေးသည့်အရာများ တပ်ဆင်ထားရန်မလိုကြောင်း ပြောပြ၏။ သို့သော် ညရောက်လျှင် စူးရှတောက်ပသည့် ကားရှေ့မီးများကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ သူနေရခက်လှ၏။
ဖြူရောင်စွဲရောဂါရှိသူတို့သည် နီရောင်သန်းသည့် မျက်လုံးများ ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်ဟု လူအများက ယူဆကြသော်လည်း ယင်းသည် မမှန်ကန်ချေ။ ဖြူရောင်စွဲရောဂါရှိသူအများစု၏ မျက်ဝန်းအရောင်မှာ မီးခိုးရောင်မွဲမွဲ၊ အညိုရောင် သို့မဟုတ် အပြာရောင်ဖြစ်ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ၎င်းတို့၏မျက်လုံးသည် အဘယ်ကြောင့် အနီရောင်သန်းပုံပေါက်နေရသနည်း။ စာစောင်တစ်စောင် (Facts About Albinism) က ဤသို့ဆိုသည်– “မီးအလင်းရောင်တချို့ကြောင့် အရောင်အနည်းငယ်သာရှိသည့် မျက်ဝန်းမှ အနီရောင် သို့မဟုတ် ခရမ်းရောင် အလင်းပြန်ဟပ်သည်။ ဤအနီရောင်အလင်းပြန်ခြင်းသည် မြင်လွှာ မှ လာသည်။ ယင်းသည် တစ်ခါတစ်ရံ လျှပ်တစ်ပြက်မီးဖြင့်ရိုက်သော ဓာတ်ပုံများတွင် မျက်လုံးများ၌ အနီရောင်အလင်းပြန်နေခြင်းနှင့် အလားတူသည်။
မျက်လုံးတွင် မူမမှန်မှုများသည် ဖြူရောင်စွဲရောဂါရှိသူများ၌ အဖြစ်များ၏။ အခြေအနေတစ်ခုမှာ မြင်လွှာမှ နဗ်ကြောများသည် ဦးနှောက်နှင့် ကောင်းစွာမဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်ပေမည်။ ယင်းကြောင့် မျက်လုံးများ တစ်ပြိုင်တည်း မလှုပ်ရှားနိုင်ပေ၊ ယင်းမျက်လုံးပိုင်ရှင်များသည် အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ အကွာအဝေးကို ကောင်းစွာမသတ်မှတ်နိုင်ပေ။ ဤအခြေအနေကို မျက်စိစွေခြင်းဟုခေါ်သည်။ ယင်းကို မျက်မှန်တပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ကုသနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံများစွာတွင် ကုထုံးမရှိသကဲ့သို့ ရှိပြန်လျှင်လည်း အကုန်အကျ အလွန်များလှ၏။ ဂျွန်သည် မျက်စိစွေခြင်းကို မည်သို့ခါးစည်းခံသနည်း။ “ကျွန်တော် ဂရုစိုက်ရတယ်။ လမ်းဖြတ်ကူးချင်တဲ့အခါ မျက်လုံးကိုသာမက နားကိုလည်း အသုံးပြုရတယ်။ ကားတစ်စီးကိုတွေ့တဲ့အခါ ကားလာနေတဲ့အသံကြားရရင် ဖြတ်ကူးဖို့မသင့်တော်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သိထားတယ်” ဟုသူကပြောပြသည်။
ထို့အပြင် မျက်လုံးများ အလိုလိုလှုပ်ခါနေခြင်းဖြစ်သော မျက်ကြောဆွဲခြင်းသည် ဖြူရောင်စွဲရောဂါကြောင့်ဖြစ်၏။ ယင်းကြောင့် အဝေးမှုန်လွန်းခြင်း သို့မဟုတ် အနီးမှုန်လွန်းခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ မျက်မှန်များ သို့မဟုတ် မျက်ကပ်မှန်များသည် တစ်ခါတစ်ရံ အမြင်အာရုံချို့တဲ့မှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သော်လည်း ပြဿနာအရင်းခံကိုမူ မပျောက်စေနိုင်ပါ။ အချို့သောသူတို့သည် ခေါင်းကိုစောင်းထားခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မျက်လုံးအနားတွင် လက်ချောင်းတစ်ချောင်းထားခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ စာဖတ်သောအခါ မျက်ကြောဆွဲခြင်းကို သက်သာလျော့နည်းစေတတ်ကြသည်။
ဂျွန်အတွက် အခက်ခဲဆုံးအရာမှာ မျက်စိစွေခြင်း သို့မဟုတ် မျက်ကြောဆွဲခြင်းမဟုတ်ဘဲ အဝေးမှုန်လွန်းခြင်းဖြစ်၏။ “စာဖတ်တဲ့အခါ စာအုပ်ကို ကပ်ပြီးကြည့်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်တော်တဲ့ အကွာအဝေးမှာထားပြီး ဖတ်တဲ့အခါ စာကို မြန်မြန်ဖတ်နိုင်တယ်။ အဲဒါက ကျွန်တော့်ရဲ့ နေ့စဉ်ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်း အစီအစဉ်အတွက် အရေးကြီးတယ်” ဟုယေဟောဝါသက်သေတစ်ဦးဖြစ်သူ ဂျွန်ကဆို၏။ သူကထပ်၍ဆိုသည်မှာ “ခရစ်ယာန်အစည်းအဝေးတွေမှာ ကျွန်တော် ဟောပြောချက်တွေပေးတဲ့အခါ ကျွန်တော့်ရဲ့မှတ်စုတွေကို အားကိုးလွန်းတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် ကောင်းစွာပြင်ဆင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ယိုရူဘာစကားနဲ့ ပုံနှိပ်စာလုံးကြီး ကင်းမျှော်စင် စာစောင်ထွက်လာတဲ့အတွက် အရမ်းဝမ်းသာတယ်။”
မျက်စိတွင် ဖြူရောင်စွဲရောဂါရှိသော ကလေးတစ်ဦးအတွက် ကျောင်းတက်ရန်မှာ စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မိဘများအနေနှင့် ကျောင်းမဖွင့်မီ ဆရာဆရာမများ သို့မဟုတ် ကျောင်းအာဏာပိုင် များနှင့် ကြိုတင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးထားခြင်းက အထောက်အကူရလေ့ရှိ၏။ ဥပမာ၊ ကျောင်းတချို့တွင် စာရွက်အောက်ခံရောင်ကတစ်မျိုး၊ ပုံနှိပ်စာလုံးအရောင်ကတစ်မျိုးဖြင့် ထုတ်ဝေထားသောစာအုပ်များ၊ ပုံနှိပ်စာလုံးကြီး ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များနှင့် အသံသွင်းတိတ်ခွေများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ မိဘများ၊ ဆရာဆရာမများနှင့် ကျောင်းအုပ်ချုပ်သူများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကောင်းရှိခြင်းဖြင့် မျက်စိတွင် ဖြူရောင်စွဲရောဂါရှိသောကလေးသည် ကျောင်းပြီးအောင် တက်နိုင်ပေသည်။
ဖြူရောင်စွဲရောဂါရှိသူအများစုသည် မိမိတို့၏ကိုယ်ကာယ ချို့ယွင်းမှုများနှင့် မည်သို့လိုက်လျောညီထွေအသက်ရှင်နိုင်ပုံကို သိရှိလာကြ၏။ သို့သော် များစွာသောသူတို့သည် မိမိတို့၏အခြေအနေကြောင့် အများနှင့်မတူ တစ်မူထူးခြားနေသည်ဟု မခံစားလိုကြချေ။ အထူးသဖြင့် ယင်းသည် ကလေးများအတွက် စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အနောက်အာဖရိကဒေသတချို့တွင် ဖြူရောင်စွဲရောဂါရှိသော ကလေးများသည် အဖြူရောင်အသားအရေကြောင့် လှောင်ပြောင်ကဲ့ရဲ့ခံရကြသည်။ ယိုရူဘာစကားပြောဆိုကြသည့် ဒေသတချို့တွင် ၎င်းတို့ကို “ရွံမုန်းစရာကောင်းသူ” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော “အာဖင်း” ဟူ၍ခေါ်ကြသည်။ များသောအားဖြင့် လူကြီးများသည် ကလေးများလောက် ပြက်ရယ်ပြုမခံရပေ။ အနောက်အာဖရိ၏ဘဝပုံစံသည် အများအားဖြင့် အိမ်အပြင်၌ အချိန်ကုန်သော်လည်း ဖြူရောင်စွဲရောဂါရှိသူတချို့သည် အိမ်တွင်းပုန်းရန် ရွေးချယ်ကြ၏။ ယင်းက အပယ်ခံရသည်၊ အသုံးမကျဟူသောခံစားချက်များ အလွယ်တကူ ဝင်လာစေနိုင်ပါသည်။ ဂျွန်သည် ဘုရားသခင့်နှုတ်မြွက်စကားတော်ဆိုင်ရာ အမှန်တရားကို မသိရှိချိန်က ထိုသို့ခံစားခဲ့ရ၏။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် နှစ်ခြင်းခံပြီးနောက် ဘဝနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ရှုမြင်ပုံမှာ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဂျွန်သည် အိမ်၌ တစ်သီးပုဂ္ဂလနေထိုင်ခဲ့သော်လည်း မိမိသင်ယူခဲ့သည့် ထူးမြတ်သောမျှော်လင့်ချက်အကြောင်းကို အိမ်ပြင်ထွက်၍ အခြားသူများအား ဟောပြောဖို့တာဝန်ရှိကြောင်း သူသိမြင်ခဲ့သည်။ သူက “ကျွန်တော့်ရဲ့ ကာယရေးအခြေအနေထက် လူတွေကို ဟောပြောဖို့က ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်” ဟုပြောသည်။ သူသည် ခရစ်ယာန်ဓမ္မအမှုတွင် သရော်ခံရပါသလော။ “တစ်ခါတလေ ကျမ်းစာသတင်းတရားကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်တဲ့သူတစ်ဦးက ကျွန်တော့်ကို သရော်ဖို့အကြောင်းရှာတဲ့အနေနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကို အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီလူဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်ဟောတဲ့သတင်းတရားကြောင့် သရော်တာကို ကျွန်တော်သိထားလို့ဖြစ်တယ်” ဟုဂျွန်က ရှင်းပြသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များက ဖြူရောင်စွဲရောဂါဆိုင်ရာ ကုသမှုသည် များစွာပြောင်းလဲသွားခဲ့လေပြီ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာသည် တစ်ခါနှင့်မျှမတူအောင် အကူအညီများစွာပေးနိုင်လာပြီဖြစ်သည်။ ဖြူရောင်စွဲရောဂါရှိသူများသည် မိမိတို့၏အတွေ့အကြုံများကို ဖလှယ်ရန်နှင့် အခြေအနေကို တိုး၍နားလည်လာစေရန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြသည်။ သို့သော် အဆုံးစွန်ဖြေရှင်းနည်းမှာ လူသားများအပေါ် မူမတည်ဘဲ ဘုရားသခင်အပေါ်၌သာ မူတည်ပါသည်။
အခြားသောရောဂါများနည်းတူ ဖြူရောင်စွဲရောဂါသည် ပထမဆုံးလူသားဖြစ်သော အာဒံထံမှ လူသားအားလုံး အမွေရလာသည့် လူ့မစုံလင်မှု၏ အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ (ကမ္ဘာဦး ၃:၁၇-၁၉; ရောမ ၅:၁၂) ယေရှုခရစ်၏ ရွေးနုတ်ဖိုးပူဇော်ရာယဇ်အားဖြင့် ယေဟောဝါသည် မကြာမီ သစ္စာရှိသူအားလုံး၏ကျန်းမာရေးကို လုံးဝကောင်းမွန်စေပါလိမ့်မည်။ မှန်ပါသည်၊ ကိုယ်တော်သည် ‘အနာရောဂါရှိသမျှတို့ကို ပျောက်စေတော်မူ’ သောအရှင်ဖြစ်ပေသည်။ (ဆာလံ ၁၀၃:၃) ထို့နောက် ဖြူရောင်စွဲရောဂါသည် အတိတ်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့တော့မည်၊ အကြောင်းမှာ ဖြူရောင်စွဲရောဂါခံစားနေရသူတို့သည် ယောဘ ၃၃:၂၅ [သမ္မာ] ပါ ဤပြည့်စုံချက်ကို ခံစားရတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်တည်း– “ထိုသူသည် သူငယ်ထက် အသားအရေနုဖတ်၍ ပျိုသောအရွယ်နှင့် တစ်ဖန် ပြည့်စုံလိမ့်မည်။”
^ အပိုဒ်၊3ဖြူရောင်စွဲရောဂါကို ခရုသင်းရောဂါနှင့် မမှားပါနှင့်။ စက်တင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၄၊ နိုးလော့! စာစောင်၊ စာမျက်နှာ ၂၂ [အင်္ဂလိပ်] ကိုရှု။
^ အပိုဒ်၊ 8 ဖြူရောင်စွဲရောဂါပုံစံတချို့နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်ကို ပူးတွဲပါလေးထောင့်ကွက်တွင်ရှု။
[စာမျက်နှာ ၂၁ ပါ အကျဉ်းဖော်ပြချက်]
“ကျွန်တော့်ရဲ့ ကာယရေးအခြေ အနေထက် လူတွေကို ဟောပြောဖို့က ပိုပြီး အရေးကြီးတယ်။”—ဂျွန်
[စာမျက်နှာ ၂၀ ပါအဓိကအချက်]
ဖြူရောင်စွဲရောဂါ၏ အဓိကအမျိုးအစားများတွင် အောက်ပါအမျိုးအစားများ ပါဝင်သည်–
မျက်လုံးနှင့်အရေပြားတို့တွင်ဖြစ်သော ဖြူရောင်စွဲရောဂါ။ အရေပြား၊ ဆံပင်နှင့် မျက်လုံးများတွင် မယ်လနင်အမည်းရောင်ခြယ်ဓာတ် ချို့တဲ့နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးအစားတွင် အမျိုးအစားပေါင်း ၂၀ ခန့်ရှိ၏။
မျက်လုံးတွင်ဖြစ်သော ဖြူရောင်စွဲရောဂါ။ မျက်လုံးတွင် အဖြစ်များပြီး အရေပြားနှင့် ဆံပင်တို့တွင် အများအားဖြင့် ပုံမှန်အနေအထားရှိသည်။
လူသိနည်းသော အခြားဖြူရောင်စွဲရောဂါများစွာ ရှိပါသေးသည်။ ဥပမာအနေနှင့် အမျိုးအစားတစ်ခုမှာ ဟာမန်စကီ-ပူးလက်ခ်လက္ခဏာစု (အိပ်ခ်ျပီအက်စ်) နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အိပ်ခ်ျပီအက်စ်ရှိသူတို့သည် အလွယ်တကူ ပွန်းပဲ့အနာတရဖြစ်တတ်သည် သို့မဟုတ် သွေးထွက်လွယ်တတ်သည်။ ပွာတိုရီကိုနိုင်ငံသားများတွင် ဤဖြူရောင်စွဲရောဂါမျိုးဖြစ်နေသူ များစွာရှိသည်၊ လူဦးရေ ၁,၈၀၀ တွင် ၁ ဦးနှုန်းဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းရ၏။